80-jir leh timo dherer la’eg 3 mitir. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka September 9, 2017	0 240 Views
Muqdisho – 22 sano kahor, Trinh Thi Nghien oo 81-jir ah waxay bilowday inay sii dayso koritaanka timaheeda. Tani iyo markaasna, maysan joogsanin.
Muuqaalka laga soo qaaday timaheeda oo dherer ahaan gaaraya 3 mitir ayaa ku baahay baraha bulshada, dadka ayaana is weydiinayay sida haweeney da’dan jirta ay ku yeelan karto timaha sidan u dheerdheer.
Hayeeshe. Trinh Thi waxay sheegaysaa inaysan rabitaankeeda ahayn sida ay maanta tahay. Sanadkii 1995 markii ay ogaatay in timaheedu ay hadba markii la jaro ay dib usoo tarmayaan, waxay go’aansatay inay sii deyso.
Sida aad fahmi kartaba, yeelashada timo sidan u dheerdheer waa arrin aan sahlanayn ka shaqeynteeda. Trinh Thi waxay sheegtay inay ku qaadato saacad inay dhaqdo maalintii qeyb kamid ahna ay ku bixiso qalajinteeda.
Waxaa intaas dheer, dadku waxay isku dayaan inay taabtaan ama ka ag-dhawadaan, taasi waxay mar walba halis iyo danqasho ku noqon kartaa nafteeda. Sidaas darteed, subax walba waxay la nooshahay foojignaanteeda gaarka ah.
Timuhu isku midab ma wada ahan. Korka hore waa ka madow: inteeda kale waxay leeyihiin midabyo isku dhaf ah oo aan madowgu soo muuqan karin.
Jiritaanka dhibaatada ay ka sheegato la noolaanshaha timahan dheerdheer, waxay haddana tilmaantay inay la qabsatay. Waxayna ku sifeysay mid rabaani ah oo dusha uga soo degtay.
Previous: Maxaad ka og tahay dhibaatada Bacdu ku leedahay nolosha iyo deegaanka?
Next: Gabar dhaawacday wiil oo si yaab leh looga dhaafay danbigeeda.